ဂျပန်တွေပြောတဲ့ ဆူရှီစားနည်း အစစ်အမှန် - For her Myanmar
ဂျပန်တွေပြောတဲ့ ဆူရှီစားနည်း အစစ်အမှန်
အထာကျကျ ဆူရှီစားနည်းတို့ ဘာတို့… 😛
ဂျပန်လို့ ပြောလိုက်ရင် ဆူရှီကိုလည်း တွဲပြီး မြင်ကြမှာပါပဲ… အဲ တစ်ခုရှိတာက မင်မင်တို့ မှားလေ့ရှိတာပေါ့… ဆူရှီဆို ကင်ဘတ်ကြီး ပြေးမြင်တာပါပဲ :3 ဆူရှီလည်း ထမင်းလိပ်၊ ကင်ဘတ်လည်း ထမင်းလိပ် မှန်ပေမဲ့ ဆူရှီကတော့ ဂျပန် ထမင်းလိပ်ဖြစ်ပြီး ကင်ဘတ်က ကိုရီးယား ထမင်းလိပ်ပါ။ အက်ဒ်မင်တို့ အိမ်မှာ ဝါးယင်းလိပ်ကလေးတွေနဲ့ ရေညှိပေါ်မှာ ထမင်းလေးတွေတင်၊ အလယ်က ဥနီတွေ၊ သခွားသီးတွေ ၊ ဘာညာ ဘာညာတွေ ထည့်ပြီး လိပ်တာက ကင်ဘတ်ပါ။ ဒါတော့ စကားစပ်မိလို့ပေါ့လေ…
ဆူရှီအကြောင်း ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ ဆူရှီမှာမှ အမျိုးအစားတွေ အများကြီး ရှိပါတယ်။ ထမင်းလုံးလေးအပြင်မှာ ရေညှိတွေကပ်ပြီး အပေါ်မှာ တူနာတင်ထားတဲ့ ထမင်းလိပ်တို့ ဘာတို့ဆိုတာလည်း ဆူရှီစာရင်းဝင်ဖြစ်ပြီး ငါးအစိမ်းကို ထမင်းလုံးပေါ်တင်ပြီး အပေါ်က ရေညှိပတ်ထားတဲ့ဟာကလည်း ဆူရှီစာရင်းဝင်ပါ။ ဒါတွေ အမျိုးအစားခွဲနေရရင် ဆောင်းပါး တစ်ပုဒ်လောက် ထပ်ရေးရဦးမှာမို့ နောက်တော့မှ ထပ်ရေးပေးမယ်နော်… ခု အဲဒီ ငါးအစိမ်းလေးတွေ အပေါ်က တင်ထားတဲ့ ဆူရှီတွေကို ဘယ်လို နည်းမှန်လမ်းမှန်နဲ့ စားရမလဲဆိုတာကို ဂျပန်ကြီးတွေ ပြောထားတဲ့အတိုင်း မင်မင်က ပြောပြပေးမယ်နော်….
Maki (မာကီ) နဲ့ Nigiri (နီဂီရီ) ဆူရှီစားတဲ့အခါ ပိုပြီး အရသာရှိအောင် စားမယ်ဆိုရင် တူနဲ့ မကိုင်ဘဲ လက်နဲ့ ကိုင်တာပါတဲ့… စားတဲ့အခါ နွေးထွေးတဲ့ ခံစားချက်ရစေဖို့ စေတနာတွေ လက်ထဲမှာထည့်ပြီး စားဖိုမှူးရဲ့ လက်နဲ့ ကိုယ်တိုင်ဖန်တီးထားတဲ့ ဆူရှီကို စားတဲ့အခါ ကိုယ့်လက်နဲ့ ပုံမပျက်အောင် ယူစားတာက သူ့ရဲ့ စေတနာကို တန်ဖိုးထားတဲ့ သဘောသက်ရောက်ပါတယ်တဲ့…ဆာရှိမိနဲ့ ချင်းကိုတော့ တူနဲ့ ယူစားလို့ ရပါတယ်။
တူကို မပွတ်မိဖို့လည်း သတိထားပါဦးယောင်းတို့ရေ.. ဘာလို့လဲဆိုတော့ တူကိုပွတ်တာဟာ ဝါးအမှုန်၊ သစ်သားအမှုန်တွေကို ခါချဖို့ ပွတ်တာလေ.. ဒီတော့ ယောင်းတို့က သတိမထားမိဘဲ ပွတ်လိုက်တဲ့အခါ ဆိုင်ကို “ဒီဆိုင်က သုံးတဲ့ တူတွေက အပေါစားတွေ” လို့ ပြောနေသလို ဖြစ်သွားနိုင်လို့ပါတဲ့…
Soy Sauce ( ပဲ ငံပြာရည်) ထည့်ဖို့ ပေးထားတဲ့ ခွက်ထဲကို ပဲ ငံပြာရည် နည်းနည်းထည့်ပါ။ လိုတဲ့အချိန်တိုင်း ထပ်ထည့်လို့ ရပေမဲ့ တစ်ခါတည်း အများကြီးထည့်ပြီး ဖြုန်းတီးတာမျိုးကိုတော့ ဂျပန်ယဉ်ကျေးမှုက မနှစ်မြို့ပါဘူး ယောင်းတို့ရေ… ပြီးတော့ ငါးအသားကို ဆော့စ်အများကြီးတို့စားရင် မြည်းတောင်မကြည့်သေးဘဲ ငါးက မလတ်လို့မို့ ဆော့စ်တွေအများကြီး ထည့်ရတယ်လို့ အဓိပ္ပာယ်ရတာကြောင့် ရိုင်းပါတယ်တဲ့ကွယ်….
ပြီးတော့ မင်မင်လုပ်နေကျ အလွယ်နည်းလေ… ဝါဆာဘိတွေကို ပဲငံပြာရည်ထဲ ရောချပစ်တာ ဟီးဟီး.. တကယ်စားရမယ့် နည်းလမ်းကတော့ ချင်းနဲ့ ဒါမှမဟုတ် တူနဲ့ ဝါဆာဘိနည်းနည်းကိုယူပြီး ငါးပေါ်တင်စားရတာပါ။ ဝါဆာဘိများသွားရင် ငါးရဲ့ သဘာဝ အရသာ မထွက်တော့တာမို့ပါတဲ့.. ပြီးတော့ ချင်းနဲ့ ဆူရှီဟာ အတူတူတွဲစားဖို့ ပေးထားတာမဟုတ်ပါဘူး။ ဆူရှီတစ်ခုစားပြီး နောက်တစ်ခု ထပ်မစားခင် ကြားထဲမှာ ခံတွင်းရှင်းဖို့ ချင်းကိုပေးထားတာပါ။
Related Article >>> ယမကာနဲ့ လိုက်ဖက်တဲ့ အမြည်းကို အထာကျကျ ရွေးတတ်စေဖို့
ကဲ.. ဒါဆို ဝါဆာဘိတွေ၊ ပဲငံပြာရည်တွေအကြောင်း ပြောပြီးပြီဆိုတော့ ဆူရှီစားလို့ ရပါပြီ။ ဆူရှီကိုစားတဲ့အခါ မင်မင်တို့ စားနေကျလို ထမင်းကိုအောက်ထား၊ ငါးကအပေါ်မှာ ပဲငံပြာရည်နဲ့ ထမင်းနဲ့ တို့ စား … ဒါမျိုးပေါ့… ဒီလိုစားတာ မှားနေပါတယ်နော်… တကယ်စားရမယ့်ပုံစံကို အဆင့်လေးတွေခွဲပြီး ပြောပြပေးမယ်နော်..
အဆင့် (၁) ။ ။ ဆူရှီကို ယူပြီး အပေါ်အောက် လှန်ချလိုက်ပါ။ ငါးက အောက်မှာပေါ့။
အဆင့် (၂) ။ ။ ပဲငံပြာရည်တို့ပါ။ ပဲငံပြာရည်နဲ့ တို့တဲ့အခါ ငါးကိုသာ တို့ရမှာဖြစ်ပြီး ထမင်းနဲ့ ပဲငံပြာရည်နဲ့ လုံးဝ မထိရဘူးနော်..အပေါ်မှာပြောခဲ့သလို နည်းနည်းပဲ တို့နော်..
အဆင့် (၃) ။ ။ စားလို့ရပါပြီ။ စားတဲ့အခါမှာလည်း ငါးကို အောက်မှာထားပြီး ပါးစပ်ထဲ ထည့်ရပါမယ်တဲ့.. ဆိုလိုတာက ငါးနဲ့ လျှာက အရင်ထိရမယ်ကွာ.. ထမင်းက အာခေါင်ဘက် ထားလိုက်ပေါ့.. ဒါမှ ငါးရဲ့ လတ်ဆတ်တဲ့ အရသာကို ကောင်းကောင်း ခံစားနိုင်မှာမို့ပါတဲ့..
အဆင့်(၄) ။ ။ ကောင်းကောင်းအရသာ ခံပါ.. 😛
နောက်တစ်ခုက ဆူရှီကို စားတဲ့အခါ တစ်ခုကို တစ်လုပ်နှုန်းသာ စားပါ။ အကြီးကြီးပဲ ပါးစပ်နဲ့ မဆန့်ဘူးလို့တော့ နှစ်ခါ ကိုက်ပြီး မစားလိုက်ပါနဲ့… ဒါဟာ ဆူရှီလုပ်တဲ့သူတွေကို စော်ကားရာကျပါတယ်တဲ့။ သူ့ရဲ့အချိန်တွေ အကုန်ခံပြီး ယောင်းစားနိုင်မယ့် အနေအထားကို အသေးစိတ် သေချာလုပ်ထားပေးရတာလေနော်.. ဆူရှီကကြီးလွန်းနေတယ်လို့ ခံစားရရင် လုပ်တဲ့သူကို ပြောပါ။ ဒါမှ ယောင်းအတွက် သူက အရွယ်အစား ပြန်ချိန်ပေးနိုင်မှာပါ။
အဲ.. ဆူရှီအရသာကို ရှယ်ခံစားချင်တယ်ဆိုရင်တော့ မင်မင်ခုပြောပြမယ့် အစဉ်အတိုင်း ငါးတွေကို စဉ် စားကြည့်ပါ။
အလွယ်မှတ်ရင်တော့ ဒီလို ရမယ်ယောင်းတို့ရေ… ဆူရှီဆိုင်တွေမှာ ငါးပုံလေးတွေ ပြထားတယ်မလား.. အဲ့ထဲက အဖြူရောင် ငါးနဲ့ ပတ်ထားတဲ့ဟာကို အရင်စား၊ ပြီးတော့ ငွေရောင်လိုင်းပါတဲ့ ငါးကို စားပေါ့၊ တတိယမြောက်မှာတော့ လုံးဝ အနီရောင်ရှိတဲ့ငါးကို စားပါ။ ပြီးတော့ ပဉ္စမမြောက်မှာ ဆယ်လ်မွန်လို ငါးမျိုးကိုရွေးချယ်ပါ။ ပြီးရင်တော့ ငါးဥလို နီနီအလုံးလေးတွေပါတာကို ရွေးပေါ့။ ပြီးတော့ အဆီအများဆုံးဖြစ်တဲ့ တူနာတို့လို ငါးမျိုးကို အပြီးသတ်အဖြစ်စားပါ။ ကြက်ဥလိပ်လေး အပေါ်မှာတင်ထားတဲ့ ဆူရှီကိုတော့ အချိုပွဲအဖြစ်စားပေါ့.. ပြီးတော့မှ ရိုးရိုးထမင်းလိပ်လေးကို အစာပိတ်အဖြစ်စားပေးလိုက်ပါ… ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ ယောင်းရယ်.. အရသာ ပေါ့ပေါ့လေးကနေစပြီး တဖြည်းဖြည်းစားရတာ အရသာလေးတဲ့ဘက်ကို သွားရတာပေါ့…
ကဲ.. ဒီလိုဆို ဆူရှီကို အရသာရှိရှိ အထာကျကျ စားနိုင်ပြီပေါ့… စာရေးရင်း ဆူရှီစားချင်လာလို့ သွားစားပြီ ယောင်းတို့ရေ… နောက်မှ ပြန်ဆုံမယ်နော်…
References : Gaijinpot , Tripsavvy
အထာကကြ ဆူရှီစားနညျးတို့ ဘာတို့… 😛
ဂပြနျလို့ ပွောလိုကျရငျ ဆူရှီကိုလညျး တှဲပွီး မွငျကွမှာပါပဲ… အဲ တဈခုရှိတာက မငျမငျတို့ မှားလရှေိ့တာပေါ့… ဆူရှီဆို ကငျဘတျကွီး ပွေးမွငျတာပါပဲ :3 ဆူရှီလညျး ထမငျးလိပျ၊ ကငျဘတျလညျး ထမငျးလိပျ မှနျပမေဲ့ ဆူရှီကတော့ ဂပြနျ ထမငျးလိပျဖွဈပွီး ကငျဘတျက ကိုရီးယား ထမငျးလိပျပါ။ အကျဒျမငျတို့ အိမျမှာ ဝါးယငျးလိပျကလေးတှနေဲ့ ရညှေိပျေါမှာ ထမငျးလေးတှတေငျ၊ အလယျက ဥနီတှေ၊ သခှားသီးတှေ ၊ ဘာညာ ဘာညာတှေ ထညျ့ပွီး လိပျတာက ကငျဘတျပါ။ ဒါတော့ စကားစပျမိလို့ပေါ့လေ…
ဆူရှီအကွောငျး ပွောရမယျဆိုရငျတော့ ဆူရှီမှာမှ အမြိုးအစားတှေ အမြားကွီး ရှိပါတယျ။ ထမငျးလုံးလေးအပွငျမှာ ရညှေိတှကေပျပွီး အပျေါမှာ တူနာတငျထားတဲ့ ထမငျးလိပျတို့ ဘာတို့ဆိုတာလညျး ဆူရှီစာရငျးဝငျဖွဈပွီး ငါးအစိမျးကို ထမငျးလုံးပျေါတငျပွီး အပျေါက ရညှေိပတျထားတဲ့ဟာကလညျး ဆူရှီစာရငျးဝငျပါ။ ဒါတှေ အမြိုးအစားခှဲနရေရငျ ဆောငျးပါး တဈပုဒျလောကျ ထပျရေးရဦးမှာမို့ နောကျတော့မှ ထပျရေးပေးမယျနျော… ခု အဲဒီ ငါးအစိမျးလေးတှေ အပျေါက တငျထားတဲ့ ဆူရှီတှကေို ဘယျလို နညျးမှနျလမျးမှနျနဲ့ စားရမလဲဆိုတာကို ဂပြနျကွီးတှေ ပွောထားတဲ့အတိုငျး မငျမငျက ပွောပွပေးမယျနျော….
Maki (မာကီ) နဲ့ Nigiri (နီဂီရီ) ဆူရှီစားတဲ့အခါ ပိုပွီး အရသာရှိအောငျ စားမယျဆိုရငျ တူနဲ့ မကိုငျဘဲ လကျနဲ့ ကိုငျတာပါတဲ့… စားတဲ့အခါ နှေးထှေးတဲ့ ခံစားခကျြရစဖေို့ စတေနာတှေ လကျထဲမှာထညျ့ပွီး စားဖိုမှူးရဲ့ လကျနဲ့ ကိုယျတိုငျဖနျတီးထားတဲ့ ဆူရှီကို စားတဲ့အခါ ကိုယျ့လကျနဲ့ ပုံမပကျြအောငျ ယူစားတာက သူ့ရဲ့ စတေနာကို တနျဖိုးထားတဲ့ သဘောသကျရောကျပါတယျတဲ့…ဆာရှိမိနဲ့ ခငျြးကိုတော့ တူနဲ့ ယူစားလို့ ရပါတယျ။
တူကို မပှတျမိဖို့လညျး သတိထားပါဦးယောငျးတို့ရေ.. ဘာလို့လဲဆိုတော့ တူကိုပှတျတာဟာ ဝါးအမှုနျ၊ သဈသားအမှုနျတှကေို ခါခဖြို့ ပှတျတာလေ.. ဒီတော့ ယောငျးတို့က သတိမထားမိဘဲ ပှတျလိုကျတဲ့အခါ ဆိုငျကို “ဒီဆိုငျက သုံးတဲ့ တူတှကေ အပေါစားတှေ” လို့ ပွောနသေလို ဖွဈသှားနိုငျလို့ပါတဲ့…
Soy Sauce ( ပဲ ငံပွာရညျ) ထညျ့ဖို့ ပေးထားတဲ့ ခှကျထဲကို ပဲ ငံပွာရညျ နညျးနညျးထညျ့ပါ။ လိုတဲ့အခြိနျတိုငျး ထပျထညျ့လို့ ရပမေဲ့ တဈခါတညျး အမြားကွီးထညျ့ပွီး ဖွုနျးတီးတာမြိုးကိုတော့ ဂပြနျယဉျကြေးမှုက မနှဈမွို့ပါဘူး ယောငျးတို့ရေ… ပွီးတော့ ငါးအသားကို ဆော့ဈအမြားကွီးတို့စားရငျ မွညျးတောငျမကွညျ့သေးဘဲ ငါးက မလတျလို့မို့ ဆော့ဈတှအေမြားကွီး ထညျ့ရတယျလို့ အဓိပ်ပာယျရတာကွောငျ့ ရိုငျးပါတယျတဲ့ကှယျ….
ပွီးတော့ မငျမငျလုပျနကြေ အလှယျနညျးလေ… ဝါဆာဘိတှကေို ပဲငံပွာရညျထဲ ရောခပြဈတာ ဟီးဟီး.. တကယျစားရမယျ့ နညျးလမျးကတော့ ခငျြးနဲ့ ဒါမှမဟုတျ တူနဲ့ ဝါဆာဘိနညျးနညျးကိုယူပွီး ငါးပျေါတငျစားရတာပါ။ ဝါဆာဘိမြားသှားရငျ ငါးရဲ့ သဘာဝ အရသာ မထှကျတော့တာမို့ပါတဲ့.. ပွီးတော့ ခငျြးနဲ့ ဆူရှီဟာ အတူတူတှဲစားဖို့ ပေးထားတာမဟုတျပါဘူး။ ဆူရှီတဈခုစားပွီး နောကျတဈခု ထပျမစားခငျ ကွားထဲမှာ ခံတှငျးရှငျးဖို့ ခငျြးကိုပေးထားတာပါ။
Related Article >>> ယမကာနဲ့ လိုကျဖကျတဲ့ အမွညျးကို အထာကကြ ရှေးတတျစဖေို့
ကဲ.. ဒါဆို ဝါဆာဘိတှေ၊ ပဲငံပွာရညျတှအေကွောငျး ပွောပွီးပွီဆိုတော့ ဆူရှီစားလို့ ရပါပွီ။ ဆူရှီကိုစားတဲ့အခါ မငျမငျတို့ စားနကေလြို ထမငျးကိုအောကျထား၊ ငါးကအပျေါမှာ ပဲငံပွာရညျနဲ့ ထမငျးနဲ့ တို့ စား … ဒါမြိုးပေါ့… ဒီလိုစားတာ မှားနပေါတယျနျော… တကယျစားရမယျ့ပုံစံကို အဆငျ့လေးတှခှေဲပွီး ပွောပွပေးမယျနျော..
အဆငျ့ (၁) ။ ။ ဆူရှီကို ယူပွီး အပျေါအောကျ လှနျခလြိုကျပါ။ ငါးက အောကျမှာပေါ့။
အဆငျ့ (၂) ။ ။ ပဲငံပွာရညျတို့ပါ။ ပဲငံပွာရညျနဲ့ တို့တဲ့အခါ ငါးကိုသာ တို့ရမှာဖွဈပွီး ထမငျးနဲ့ ပဲငံပွာရညျနဲ့ လုံးဝ မထိရဘူးနျော..အပျေါမှာပွောခဲ့သလို နညျးနညျးပဲ တို့နျော..
အဆငျ့ (၃) ။ ။ စားလို့ရပါပွီ။ စားတဲ့အခါမှာလညျး ငါးကို အောကျမှာထားပွီး ပါးစပျထဲ ထညျ့ရပါမယျတဲ့.. ဆိုလိုတာက ငါးနဲ့ လြှာက အရငျထိရမယျကှာ.. ထမငျးက အာခေါငျဘကျ ထားလိုကျပေါ့.. ဒါမှ ငါးရဲ့ လတျဆတျတဲ့ အရသာကို ကောငျးကောငျး ခံစားနိုငျမှာမို့ပါတဲ့..
အဆငျ့(၄) ။ ။ ကောငျးကောငျးအရသာ ခံပါ.. 😛
နောကျတဈခုက ဆူရှီကို စားတဲ့အခါ တဈခုကို တဈလုပျနှုနျးသာ စားပါ။ အကွီးကွီးပဲ ပါးစပျနဲ့ မဆနျ့ဘူးလို့တော့ နှဈခါ ကိုကျပွီး မစားလိုကျပါနဲ့… ဒါဟာ ဆူရှီလုပျတဲ့သူတှကေို စျောကားရာကပြါတယျတဲ့။ သူ့ရဲ့အခြိနျတှေ အကုနျခံပွီး ယောငျးစားနိုငျမယျ့ အနအေထားကို အသေးစိတျ သခြောလုပျထားပေးရတာလနေျော.. ဆူရှီကကွီးလှနျးနတေယျလို့ ခံစားရရငျ လုပျတဲ့သူကို ပွောပါ။ ဒါမှ ယောငျးအတှကျ သူက အရှယျအစား ပွနျခြိနျပေးနိုငျမှာပါ။
အဲ.. ဆူရှီအရသာကို ရှယျခံစားခငျြတယျဆိုရငျတော့ မငျမငျခုပွောပွမယျ့ အစဉျအတိုငျး ငါးတှကေို စဉျ စားကွညျ့ပါ။
အလှယျမှတျရငျတော့ ဒီလို ရမယျယောငျးတို့ရေ… ဆူရှီဆိုငျတှမှော ငါးပုံလေးတှေ ပွထားတယျမလား.. အဲ့ထဲက အဖွူရောငျ ငါးနဲ့ ပတျထားတဲ့ဟာကို အရငျစား၊ ပွီးတော့ ငှရေောငျလိုငျးပါတဲ့ ငါးကို စားပေါ့၊ တတိယမွောကျမှာတော့ လုံးဝ အနီရောငျရှိတဲ့ငါးကို စားပါ။ ပွီးတော့ ပဉ်စမမွောကျမှာ ဆယျလျမှနျလို ငါးမြိုးကိုရှေးခယျြပါ။ ပွီးရငျတော့ ငါးဥလို နီနီအလုံးလေးတှပေါတာကို ရှေးပေါ့။ ပွီးတော့ အဆီအမြားဆုံးဖွဈတဲ့ တူနာတို့လို ငါးမြိုးကို အပွီးသတျအဖွဈစားပါ။ ကွကျဥလိပျလေး အပျေါမှာတငျထားတဲ့ ဆူရှီကိုတော့ အခြိုပှဲအဖွဈစားပေါ့.. ပွီးတော့မှ ရိုးရိုးထမငျးလိပျလေးကို အစာပိတျအဖွဈစားပေးလိုကျပါ… ပွောရမယျဆိုရငျတော့ ယောငျးရယျ.. အရသာ ပေါ့ပေါ့လေးကနစေပွီး တဖွညျးဖွညျးစားရတာ အရသာလေးတဲ့ဘကျကို သှားရတာပေါ့…
ကဲ.. ဒီလိုဆို ဆူရှီကို အရသာရှိရှိ အထာကကြ စားနိုငျပွီပေါ့… စာရေးရငျး ဆူရှီစားခငျြလာလို့ သှားစားပွီ ယောငျးတို့ရေ… နောကျမှ ပွနျဆုံမယျနျော…
Tags: Eat, Food, How, Knowledge, Soysauce, Sushi, Traditionally, Wasabi
မိတ်ကပ်ပုံစံကို လိုက်ပြီး ရွေးချယ်နိုင်စေဖို့ အခြေခံ မိတ်ကပ်ဖျက်ဆေး (၄)မျိုး
Wathun June 22, 2018